Wicitaanka Waajibaadka: Mobilka ayaa ugu sarreeya liiska cayaaraha ugu badan ee la soo dejiyey in ka badan 100 waddan | Wararka IPhone
Talaadadii la soo dhaafay, sida la qorsheeyay, ragga ka socda Activision, iyada oo loo marayo Tencent waxay sii daayeen nooca ugu dambeeya ee Wicitaanka Waajibaadka: Mobilada, cinwaan cusub oo ku biirayaa dagaalka royale fashion, Kaas oo ka yimid gacanta Fortnite iyo PUBG, laakiin sidoo kale na siiya qaababka caadiga ah ee aan ka heli karno nooca kombiyuutarka iyo konsolesyada.
Maanta, nooca mobilada ee Wicitaanka Waajibaadka waxaa lagala soo degay in ka badan 35 milyan oo qalab, tirinta labada barnaamij ee IOS iyo Android, taas oo u saamaxday inay sare u qaado labada liis ee inta badan ciyaaraha la soo dejiyey labada madal, iyadoo la gelinayo kaalinta labaad Safarka Mario Kart, mid kale oo ka mid ah dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee sidoo kale loo heli karo taleefannada gacanta.
Activision waxay si rasmi ah u xaqiijisay inay ka shaqeyneyso horumarinta nooca mobilada ee Call of Duty bishii Maarso ee la soo dhaafay, iyadoo la bilaabay beta-kii ugu horreeyay bishii Maajo. Sida Fortnite iyo PUBG, Call of Duty Mobile ayaa loo heli karaa soo dejinta gebi ahaanba bilaash oo waxay na siisaa wax soo iibsiyo kala duwan oo gudaha ah. Sida laga soo xigtay shirkadda:
Jawaabta ay ka heleen taageerayaasha Android iyo iOS waxay noqotay mid cajiib ah. Wicitaanka Waajibaadka: Mobiilku wuxuu durba dhaafey 35 milyan oo soo dejin ah isagoo ku socda wadadiisa si uu u noqdo lambarka koowaad ee barnaamijka iOS ee guud ahaan soo dejinta, kaliya maahan ciyaaraha oo dhan, laakiin barnaamijyada oo dhan, ee 100 dal.
Tani waa waayo-aragnimo cajiib ah oo xiiso leh, oo hadda ayaan bilaabaynaa. Waxaan u hambalyeynayaa kooxaha 'Activision' iyo bahwadaagteena Tencent's TiMi Studios oo sameysay ciyaar aad u wanaagsan oo loogu talagalay cayaartoyda. Waxaana si gaar ah ugu mahadcelinayaa taageerayaasheena taageeradooda joogtada ah. Waxaa jira tanno badan oo lafilayo markaan sii deyno waxyaabo badan iyo cusbooneysiin.
Tencent, waa isla soosaaraha PUBG, sidaa darteed isdhexgalka iyo waxqabadka ciyaarta labaduba waxay aad ugu egyihiin PUBG taleefanka gacanta, ciyaar noqotay ugu faa iidada badan nidaamka deegaanka ee ciyaaraha moobiilka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ciyaaraha IPhone » Wicitaanka Waajibaadka: Mobilka ayaa ugu sarreeya liiska cayaaraha ugu badan ee la soo dejiyey in ka badan 100 waddan